अण्डा र बच्चा एकसाथ जन्माउने क्षमता भएको तीन खुट्टे अचम्मको छेपारो भेटियो | News Polar
अण्डा र बच्चा एकसाथ जन्माउने क्षमता भएको तीन खुट्टे अचम्मको छेपारो भेटियो
एजेन्सी । विश्वमा धेरै अनौठा जीवहरु पाइन्छ । विश्वमा यस्ता जीवहरु पनि छन् जुन हामिलाई थाहा पनि छैन । कहिलेकाही नसोचेका जीवहरु एक्कासी देखिने गर्छन् । यस्तै छेपारोको एक नयाँ प्रजाति फेला परेको छ । वैज्ञानिकहरुले सर्प जस्तै देखिने एक अनौठो छेपारो फेला पारेका हुन् ।
यस्तो प्रजातिको छपारो जसले एकसाथ बच्चा जन्माउने र फुल पार्ने गर्छ । साइफोस इक्वालिस नामले चिनिएको यो छेपारोले अण्डा दिने गर्छन् । अण्डा र बच्चा जन्माउन सक्ने क्षमता भएको यो छेपारोको तीन वटा खुट्टा छन् । यो छेपारो बिमोडल प्रजननमा सक्षम छ । यसको मतलब यसले अण्डा पार्छ र बच्चा जन्माउँदछ। सिड्नी विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकले गरेको खोजमा दुई तरिकाबाट प्रजननमा सक्षम रहेको यो छपारोबारे पत्ता लगाएका हुन् ।
# साइफोस इक्वालिस # एकसाथ बच्चा जन्माउने # छेपारो # अनौठा जीव
प्रकाशित : पुष २६, २०७७, ११:५४:५०
किन निल्दैछ ब्ल्याकहोलले आफ्ना वरपर आउने पिण्डहरुलाई ? हालै निल्यो सूर्य जत्रो तारा पनि !!
खुट्टाको औँलाको आकारबाट स्वभाव कसरी थाहा हुन्छ ? जान्नुहोस्
विश्वमा कति छन् मोबाइल प्रयोगकर्ता ? जान्नुहोस्
यी राशिलाई सुनको गहना लाउँदा हुन्छ नकारात्मक असर